Ny birao raharaham-bahiny UK dia nanova ny torohevitra momba ny dia ho an'i Tonizia
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny birao raharaham-bahiny UK dia nanova ny torohevitra momba ny dia ho an'i Tonizia
Jolay 26, 2017
Ny birao UK & Commonwealth any UK dia nanova ny toro-hevitra momba ny dia ho an'i Tonizia. Tsy manoro hevitra intsony ny amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ankamaroan'ny firenena, ao anatin'izany i Tunis sy ireo toerana fizahan-tany lehibe.
Hatramin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro mahatsiravina tao amin'ny Bardo National Museum sy Sousse tamin'ny 2015, izay namoizana ain'ireo anglisy 31 ny fanjakana, dia notazomin'ny governemanta hatrany ny tombana amin'ny mety ho an'ireo teratany britanika mandeha any Tonizia. Izy io koa dia niara-niasa akaiky tamin'ny Governemanta Toniziana sy ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena hanohanana ny fanatsarana ny fepetra fiarovana an'i Tonizia.
Rehefa avy nandinika ny toe-javatra tany Tonizia - anisan'izany ny fandrahonana amin'ny fampihorohoroana sy ny fanatsarana ny hery fiarovana Toniziana - nanapa-kevitra ny governemanta fa tokony hiova ny toro-hevitra momba ny dia.
Ny minisitry ny Moyen Orient sy Afrika Avaratra Alistair Burt dia nilaza fa:
“Ny torohevitray momba ny dia dia manampy ny olona handray fanapahan-kevitra manokana momba ny dia an-tany hafa. Ny toro-hevitra ho an'i Tonizia sy ho an'ny firenena rehetra dia voadinika matetika.
“Ity fanavaozana ity dia hita taratra amin'ny tombana farany nataontsika fa niova ny loza ateraky ny teratany anglisy ao Tonizia. Izy io dia ampahany amin'ny fanatsarana ny fiarovana nataon'ny manampahefana Toniziana sy ny indostrian'ny fizahantany hatramin'ny nisian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 2015, miaraka amin'ny fanohanan'ny UK sy ny mpiara-miasa iraisam-pirenena.
“Na eo aza ny fanovana torohevitra manohitra ny rehetra, fa ny fitsangatsanganana ilaina any amin'ny ankamaroan'ny Tonizia, dia mbola misy ny risika ho an'ireo teratany britanika ary mamporisika ny olona aho hamaky ny toro-hevitra momba ny dia alohan'ny handaminana ny diany.”
Ny mpampihorohoro dia mety mbola hanao fanafihana any Tonizia, toy ny any amin'ny firenena maro hafa. Tsy misy ny fivezivezena ary tsy atahorana izany ary mamporisika ny olona ny governemanta hanohy hanaraka ny toro-hevitra momba ny dia farany alohan'ny hitetezana azy ireo ary handray ny fanapahan-kevitr'izy ireo momba ny dia na tsia. Manohy manome torohevitra ny UK ny amin'ny tsy fandehanana any amin'ny faritra sasany any Tonizia, ao anatin'izany ireo izay akaiky kokoa ny sisin-tanin'i Libya sy amin'ny faritra miaramila mihidy.
Ny toro-hevitra momba ny dia farany mankany Tonizia dia hita eto, izay ahafahan'ny mpitsidika misoratra anarana amin'ny serivisy fampandrenesana mailaka holazaina isaky ny havaozina ny torohevitra momba ny dia any Tonizia.
Tsy nisy fanafihana mpampihorohoro kendrena amin'ireo mpizahatany vahiny ao Tonizia hatramin'ny Sousse tamin'ny volana Jona 2015.
UK dia manao tombana amin'ny torohevitra momba ny dia manokana momba azy. Na izany aza, ireo fanovana ireo dia mitondra ny torohevitra any UK hifanaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe - anisan'izany i Etazonia, Frantsa, Italia ary Alemana.
Fananganana toeran-kaleha ho an'ny maharitra maharitra rahampitso
Niditra tao Malezia i Sanya mba hampiroborobo ny hatsaran-tarehiny voajanahary sy ny voromahery tokana ao aminy